SME | ရှမ်းပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သွားရောက်စစ်ဆေးမှုခရီးစဉ်
ရှမ်းပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သွားရောက်စစ်ဆေးမှုခရီးစဉ်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းဆွေသည် (၂၉. ၉. ၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနသို့ စစ်ဆေးရန်အတွက် သွားရောက်ခဲ့ရာ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး၊ ဌာနကြီးမှူးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခရီးစဉ်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြရန်အတွက် လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ နေ့လည်(၁၆:၀၀)နာရီတွင် အေးသာယာ၊ ထုံးဖိုရှိ တောင်ကြီးခရိုင်စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။
(၃၀.၉.၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၁၄:၄၅)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဌာနအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများအပေါ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။